ऋण राशि के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki ऋण रकम
क्रेडिट रकम के हो?
तपाईं एक ऋण उधार लिनु पर्छ र थाहा छैन के तपाईं हुने के हो? सबैभन्दा पहिला, एक वास्तविकता को बीचमा तपाईलाई वास्तवमा के बीच बनाइन्छ र कुन प्रकार्यमा तपाईं क्रेडिट दाबी गर्न चाहानुहुन्छ। एक ऋण पनि ऋण भनिन्छ र जब तपाईं बैंक जस्तै अन्य मानिसहरूलाई पैसा कमाउनुहुन्छ। अब यो हुन सक्छ कि तपाई आत्म-पर्याप्त हुन चाहनुहुन्छ र व्यापार सुरुवात क्रेडिटको लागि दावी गर्न चाहानुहुन्छ। यस क्षणमा यो केवल पैसा उधार्ने बारेमा होइन, तर ब्याज दर, छुटकारा दर र परिपक्वताको बारेमा पनि। तपाईंले यो सबै क्रेडिटलाई क्रेडिटमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि तपाइँ सुरक्षित हुनु चाहानुहुन्छ भने, तपाईलाई सधैं विषयसँग परिचित व्यक्ति संग कुरा गर्नु पर्छ। यो राम्रो छ यदि तपाईसँग एक बैंक सल्लाहकार हो जुन तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंलाई असल सुझाव र सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। अब, तथापि, हामी वास्तविक कुराको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं ऋण रकम, यो योग X हुन आवश्यक छ। तपाईंलाई 20.000 यूरोको आवश्यकता मान्ने, त्यसपछि त्यो ऋण योग हो। तर त्यहाँ आउन थप छ।
ब्याज दर बारे सोच्नुहोस्
तपाईंले चासो तिर्न पर्छ। त्यसोभए, धेरै बैंकहरूले पनि अवशिष्ट ऋण बीमाको साथमा हेगेज र यो पनि ऋण योगमा समावेश गर्नु पर्दछ। ब्याज दर सामान्यतया निश्चित दर छ जुन तपाईं ऋण प्रयोग गर्नु अघि सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तपाईलाई यस बारे जानकारी दिइएको छ। कुनै पनि अवस्थामा, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं पैसा संग के गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईलाई लक्षित प्रयोग सूचित गर्नु पर्दछ। तथ्य यो हो कि आज धेरै पसलहरु ऋण संग भुक्तान गरिन्छ र यो संभावना अक्सर केहि बर्दाश्त गर्न सक्षम हुन को लागी पनि एक छ। विशेष गरी कम्पनीहरूले पनि धेरै मात्रामा दावी गरिरहेका छन् र सम्बन्धित क्रेडिट गर्न चाहन्छन्। यो क्रेडिट उपयोगी छ र बेशक फेरि जाँच गर्न सकिन्छ। तपाईंले आफैलाई वास्तविक क्रेडिटबाट सुरक्षित राख्नुपर्दछ जुन तपाईंले रुचि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यी माथि क्रेडिट योगमा आउँछ। एउटा प्रस्तावमा, तपाईं विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, र आवश्यक भएमा यो सबै कुरा सोध्नुहोस्। धेरै मानिसहरू अनिश्चित छन् र यो असामान्य छैन।
जब यो उच्च योगमा आउँदछ, यी मानिसहरू आफैंलाई सम्भव छ र सम्भव छ। त्यसैले तपाईं पूर्णतया निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईं गल्ती गर्न सक्नुहुन्न र देख्न सक्दछ कि तिनीहरूले कतै जित्न सक्दछन् ऋण तिर्न सक्दछन्। त्यसैले ऋण रनटाइममा धेरै लामो हुनुपर्दैन। त्यसपछि तपाइँ उच्च प्रतिष्ठानहरू पनि स्वीकार गर्न चाहानुहुन्छ। थप जानकारीको लागि तपाईंको बैंक वा इन्टरनेटको साथ जाँच्नुहोस्। तिनीहरू सबै प्रश्नहरूको जानकारी प्रदान गर्न खुसी हुनेछन्, तपाईं देख्नुहुनेछ। क्रेडिट र ऋण रकम सधैं मनमा राख्न सकिन्छ। यदि ब्याज दर समायोजन समयको साथ बनाइन्छ भने, यो सोधिन्छ किन यो भयो। यदि ऋणसँग समस्या छ भने कसैले सम्पर्क व्यक्तिलाई सोध्न सक्छ। आज क्रेडिट क्रेडिट आफैको लागि केवल सानो छ। यद्यपि, अधिक से अधिक मान्छे एक ऋण को बारे मा सोच रहे हो र यो पनि लाग््छ कि यो उनको लागि अंतिम रिसोर्ट हो। यसैले तपाई सधैँ सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईसँग पनि सबै पक्षहरूमा सन्तुलित छ र सायद एक निजी ऋण पनि लिनुहोस्। यी सामान्यतया चासो बिना छ र त्यहाँ शुद्ध क्रेडिट रकम भुक्तान गरिएको छ।
अर्को लेखकल क्रेडिट